ACHỌRỌ M FAỊLỤ NKESA NA SSD - SSD - 2019
MKV na AVI bụ ihe mgbasa ozi mgbasa ozi na-ewu ewu, nke nwere ihe ndekọ data maka isi playback video. Ndị na-egwu egwuregwu na kọmputa na ndị na-elekọta ụlọ n'oge a na-akwado ọrụ ahụ na ụzọ abụọ. Ma naanị afọ ole na ole gara aga, ọ bụ naanị ndị otu ụlọ nwere ike ịrụ ọrụ na MKV. Ya mere, maka ndị na-eji ha eme ihe, okwu nke ịtụgharị MKV ka AVI dị mkpa.
Ụzọ niile maka ịtụgharị usoro ndị a nwere ike kewaa n'ime ụzọ abụọ: ojiji nke mmemme ntọghata na iji ọrụ ịntanetị maka ịtụgharị. Kpọmkwem, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi eji kpọmkwem mmemme.
Usoro 1: Xilisoft Video Converter
Ngwa a na-ewu ewu iji gbanwee vidio n'ime ụdị dị iche iche, gụnyere MKV ka ntụgharị AVI, bụ Xilisoft Video Converter.
Mwepụta Xilisoft Video Converter. Iji tinye faịlụ ka ịhazi, pịa "Tinye" na n'elu mmanya.
Ntinye vidiyo vidio meghere. Gaa na ebe ebe vidiyo dị na MKV, wepụta ya wee pịa "Meghee".
Enwere usoro maka ibubata data. Mgbe agwụchara ya, a ga-egosipụta aha faịlụ ahụ gbakwunyere na windo XylIsoft Video Converter.
Ugbu a, ịkwesịrị ịkọwa usoro a ga-esi mee mgbanwe ahụ. Iji mee nke a, pịa ubi "Profaịlụ"emi odude ke idak. Na ndepụta na-emepe, kwagharịa na taabụ "Ọdịdị Multimedia". N'akụkụ aka ekpe nke ndepụta, họrọ "AVI". Mgbe ahụ, n'akụkụ aka nri, họrọ otu n'ime nhọrọ maka usoro a. Nke kachasị mfe n'ime ha ka a na-akpọ "AVI".
Mgbe ịhọrọ profaịlụ, ị nwere ike ịgbanwe ebe nchekwa ebe maka mmepụta nke vidiyo a gbanwere. Site na ndabara, nke a bụ aha ndekọ a kapịrị ọnụ na usoro ahụ akọwapụtara. Enwere ike ịhụ adreesị ahụ n'ọhịa. "Nhọkọ". Ọ bụrụ na ihe kpatara ya anaghị adabara gị, wee pịa "Nyochaa ...".
Nhọrọ windo ndekọ na-agba ọsọ. Ọ dị mkpa ịkwaga na nchekwa ahụ ebe a ga-echekwa ihe ahụ. Pịa "Họrọ nchekwa".
I nwekwara ike ime ntọala ndị ọzọ na pane nri nke windo na otu "Profaịlụ". N'ebe a, ị nwere ike ịgbanwe aha faịlụ ikpeazụ, ntaneti vidiyo, ọdịyo na vidiyo bit. Ma ịgbanwe agbanwe ederede aha abụghị ihe amanyere.
Mgbe emechara ntọala niile a, ị ga-aga n'ihu na mmalite usoro ntọghata. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ. Mbụ, ị nwere ike ịdebanye aha aha ma ọ bụ ọtụtụ aha na listi na window window ma pịa "Malite" na panel.
Ịnwekwara ike ịpị igodo vidiyo na ndepụta ahụ na bọtịnụ òké aka (PKM) na ndepụta nke mepee, họrọ "Tọghata ihe (s) ahọpụtara" ma ọ bụ pịa pịa igodo F5.
Nke ọ bụla n'ime omume ndị a na-amalite MKV ka usoro ntọghata AVI. Ị nwere ike ịhụ ọganihu ya site n'enyemaka nke akara ngosi dị n'ọhịa "Ọnọdụ", nke gosiri na pasent.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, na-emegide aha vidiyo ahụ n'ọhịa "Ọnọdụ" akọrọ akọrọ na-apụta.
Iji gaa ozugbo gaa na nri nke ubi "Nhọkọ" pịa na "Meghee".
Windows Explorer meghee kpọmkwem na ebe nke ihe gbanwere na AVI n'ụdị. Ị nwere ike ịchọta ya n'ebe ahụ ka ị rụọ ọrụ n'ihu ya (nlele, edezi, wdg).
Ihe ọghọm dị na usoro a bụ na Xilisoft Video Converter adịghị ezucharịrị ma kwụọ ụgwọ.
Usoro 2: gbanwee
Ihe ngwanrọ ọzọ nke nwere ike ịtụgharị MKV ka AVI bụ onye ntụgharị converti dị nta.
Mbụ, igbagha Convertilla. Iji mepee faịlụ MKV a chọrọ ka a gbanwee, ịnwere ike ịdọrọ ya Onye nduzi na window mpịakọta. N'oge usoro a, a ga-etinye bọtịnụ aka-ekpe aka ekpe.
Ma, e nwere ụzọ iji gbakwunye isi iyi na mmalite nke windo oghere. Pịa bọtịnụ ahụ "Meghee" n'aka nri nke edemede ahụ "Mepee ma ọ bụ dọrọ faịlụ vidio ebe a".
Ndị ọrụ ahụ na-ahọrọ ịmegharị site na menu nwere ike ịpị na listi ederede "Njikwa" na n'ihu "Meghee".
Window amalite. "Họrọ Njikwa Video". Na-agagharị na mpaghara ebe ihe na MKV ndọtị dị. Mee nhọrọ, pịa "Meghee".
Ụzọ na vidiyo ahọrọ ka egosiri na ubi "Njikwa iji tọghata". Ugbu a na taabụ "Hazie" Mgbanwe anyị ga-arụ ụfọdụ manipulations. N'ọhịa "Hazie" họrọ ọnụọgụ site na listi ederede "AVI".
Site na ndabara, a na-echekwa vidiyo na-edozi n'otu ebe dị ka isi iyi. Ị nwere ike ịhụ ụzọ ịchekwa na ala nke interface Convertila n'ọhịa "Njikwa". Ọ bụrụ na ọ gaghị eju gị afọ, pịa akara ngosi nke nwere ihe ndepụta nke folda ahụ n'aka ekpe nke ubi a.
Window maka ịhọrọ ndekọ bụ oghe. Bugharia n'ime ya ebe diski ike ahu ebe ichoro izipu vidiyo mbughariri mgbe emeghariri. Wee pịa "Meghee".
Ị nwekwara ike ịmebe ntọala ndị ọzọ. Ya bụ, dee ụdị àgwà vidiyo na nha. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ndị a, ị nweghị ike imetụ ntọala ndị a ma ọlị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime mgbanwe, mgbe ahụ n'ọhịa "Mma" site na listi ndala, gbanwee uru "Mbụ" na "Ndị ọzọ". A ga - egosi ọkwa nke ọma, n'akụkụ aka ekpe nke ala dị ala, na n'aka nri - kachasị elu. Iji nruo, na-ejide bọtịnụ akaekpe, megharịa ihe mmịfe ahụ ruo ogo nke ọ na-ewere dị ka ọ na-anabata.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ogo dị elu ị họọrọ, nke ka mma n'ọdịdị vidiyo a gbanwere, ma n'otu oge ahụ, ka faịlụ ikpeazụ ahụ ga-atụle, oge oge a ga-agbanwe ga-abawanye.
Nhọrọ ọzọ nke nhọrọ bụ nha nhọrọ nhazi. Iji mee nke a, pịa ubi "Size". Site na ndepụta nke meghere, gbanwee uru "Mbụ" site n'ibu ogo nke i chere na o kwesiri.
Mgbe emechara ntọala niile, pịa "Tọghata".
Usoro nke ịtụgharị vidiyo site na MKV ka AVI amalite. Ị nwere ike nyochaa ọganihu nke usoro a site n'enyemaka nke akara ngosi. A na-egosikwa ọganihu na percentages.
Mgbe akakabarede zuru oke, ozi "Nchigharị zuru ezu". Iji gaa ihe a gbanwere agbanwe, pịa akara ngosi ahụ n'ụdị nke ndekọ gaa n'aka nri nke ubi ahụ. "Njikwa".
Malite Explorer n'ebe a na-agbanwe vidiyo ahụ gaa AVI. Ugbu a ị nwere ike ịlele, kwagharịa ma ọ bụ dezie ya na ngwa ndị ọzọ.
Usoro 3: Hamster Free Video Converter
Ngwa ọrụ ọzọ nke n'efu nke na-agbanwe MKV faịlụ AVI bụ Hamster Free Video Converter.
Ịmepụta Hamster Free Video Ihe Ntụgharị. Ịnwere ike ịgbakwunye faịlụ vidiyo maka nhazi, dịka na omume na Convertilla, site n'ịdọkpụ ya Onye nduzi na windo mmeghari.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye site na windo oghe, wee pịa "Tinye faịlụ".
Jiri ngwaọrụ nke windo a, gaa n'ebe ebe MKV dị na ya dị, jiri ya ma pịa ya "Meghee".
Aha nke ihe a bu pụta ụwa ga-apụta na window Free Video Converter window. Pịa ala "Na-esote".
Ihuenyo maka ịhazi usoro na ngwaọrụ amalite. Gaa na nke nta nke akara ngosi na windo a - "Ụdị na ngwaọrụ". Pịa na akara ngosi "AVI". Ọ bụ ya bụ onye mbụ n'ime nchịkọta a kapịrị ọnụ.
Mpaghara ahụ mepee na ntọala ndị ọzọ. N'ebe a ị nwere ike ịkọwa ihe ndị na-esonụ:
Ntọala ọdịyo (channel, codec, ọnụego bit, ọnụego sample).
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị ọrụ ọ bụla pụrụ iche, mgbe ahụ ọ dịghị mkpa ka i mebie ntọala ndị a, na-ahapụ ha ka ha dị. N'agbanyeghị ma ị gbanwere mgbanwe dị elu ma ọ bụ na ọ bụghị, iji malite ntụgharị, pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata".
Malite "Chọgharịa nchekwa". Na ya, ịkwesịrị ịkwaga ebe folda ahụ ị na-aga izipu vidiyo ahụ gbanwere, wee họrọ nchekwa a. Pịa ala "OK".
Usoro ntọghata amalite na akpaghị aka. E nwere ike ịhụ ọnọdụ dị n'ọganihu nke ọhụụ na-egosi na pasent.
Mgbe usoro ntughari ahụ gafere, ozi ga-apụta na windo Free Video Converter window, na-agwa gị nke a. Iji mepee ebe etinyere video AVI a gbanwere, pịa "Nchekwa nchekwa".
Explorer na-agba n'ime ndekọ ebe ihe dị n'elu dị.
Usoro 4: Ihe ọ bụla Video Ihe Ntụgharị
Ngwa ọzọ nke nwere ike ịrụ ọrụ ahụ dị na isiokwu a bụ Ihe ọ bụla Video Ihe Ntụgharị, nyere dị ka nsụgharị ụgwọ na arụmọrụ dị elu, na n'efu, ma yana ihe niile dị mkpa maka ntụgharị ihu igwe dị elu.
Na-agba ọsọ nke Ani Video Converter. Tinye MKV maka nhazi nwere ike ịghọ aghụghọ ole na ole. Nke mbụ, enwere ike ịdọkpụrụ si Onye nduzi ihe na ihe ọ bụla Video Converter window.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike pịa "Tinye ma ọ bụ dọrọ faịlụ" na etiti windo ahụ ma ọ bụ pịa bọtịnụ "Tinye Video".
Ekem window window mbubata ga-amalite. Na-agagharị na ebe MKV dị. Chee ihe a, pịa "Meghee".
Aha nke vidiyo ahọrọ ga-apụta na window Ani Video Converter window. Mgbe ị gbakwunyere clip, ị ga-ezipụta ntụziaka nke ntọghata. Enwere ike ime nke a site na iji ubi "Họrọ profaịlụ"nke dị n'aka ekpe nke bọtịnụ ahụ "Tọghata!". Pịa ubi a.
Otu nnukwu ndepụta nke usoro na ngwaọrụ ga-emepe. Iji chọta ngwa achọrọ na ya, họrọ akara ngosi na akụkụ aka ekpe nke ndepụta. "Faịlụ vidio" dị ka ihe nkiri vidiyo. N'ụzọ dị otú a ị ga-aga ozugbo. "Ụdị Video". Chee ọnọdụ na ndepụta "Akara AVI Movie (* .avi) ahaziri".
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgbanwe ụfọdụ ntọala ntọghata na ndabara. Dịka ọmụmaatụ, vidiyo a gbanwere na-egosipụta na ndekọ dị iche. "Ihe ọ bụla Video Ihe Ntụgharị". Iji mee ka ndekọ mmepụta ahụ kwụsị, pịa "Ntọala Ntọala". Otu nhazi nke ntọala ga-emepe. Ntọala ndị ọzọ "Ntuziaka mmepụta" Pịa na akara ngosi dị n'ụdị katalọgụ.
Na-emeghe "Chọgharịa nchekwa". Kọwaa ebe ịchọrọ izipu vidio ahụ. Pịa ala "OK".
Ọ bụrụ na achọrọ, na nhazi ntọala "Nhọrọ vidiyo" ma "Nhọrọ nhọrọ ụda" Ị nwere ike ịgbanwe koodu codecs, ọnụego bit, ụda etiti na ọwa egwu. Mana naanị ị ga-eme ntọala ndị a ma ọ bụrụ na i nwere ihe mgbaru ọsọ ị nweta faịlụ AVI na-apụ na ụfọdụ kpọmkwem akọwapụtara kpọmkwem. N'ọtụtụ ọnọdụ, ntọala ndị a adịghị mkpa imetụ aka.
A na-edozi parameters achọrọ, pịa "Tọghata!".
Usoro nke ịmalite ịmalite amalite, enwere ike ịhụ ọganihu ya n'otu oge na ụkpụrụ pasent na site n'enyemaka nke akara ngosi.
Ozugbo akakabarede zuru oke, windo ga-emeghe. Onye nduzi na ndekọ ebe e debere ihe edozi na AVI usoro.
Ihe omumu: Otu esi gbanwee vidiyo gaa usoro ozo
Usoro 5: Hazie Ụlọ ọrụ
Anyị kwubiri nyocha anyị banyere ụzọ maka ịtụgharị MKV ka AVI na nkọwa nke usoro a na usoro mmepụta usoro.
Mgbe ị na-ebute usoro ihe nchịkọta, pịa bọtịnụ ahụ. "AVI".
A na-emepe windo ntọala maka ịtụgharị na AVI. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa ntọala dị elu, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Hazie".
Ngosipụta ntọala dị elu gosiri. N'ebe a, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịgbanwe koodu ntanetị na vidiyo, ntinye vidiyo, ọnụego bit na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe emechara mgbanwe, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, pịa "OK".
Ịlaghachi na windo ntọala AVI, iji kọwaa isi iyi, pịa "Tinye Njikwa".
Na diski ike, chọta ihe MKV ịchọrọ ịgbanwuo, denye ya wee pịa "Meghee".
Aha vidiyo na-egosi na windo ntọala. Site na ndabara, faịlụ a gbanwere ga-eziga na ndekọ aha pụrụ iche. "Ụgha". Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ndekọ ebe a ga-eziga ihe ahụ mgbe nhazi, wee pịa ubi "Njedebe Ikpeazụ" na ala nke windo ahụ. Site na ndepụta nke gosipụtara, họrọ "Tinye nchekwa ...".
Igwe nchịkọta ndekọ na-egosi. Dee ndekọ aha ma pịa "OK".
Ugbu a ị nwere ike ịmalite usoro nke ịtụgharị. Iji mee nke a, pịa "OK" na window ntọala.
Ịlaghachi na windo mmemme mmemme ahụ, họrọ aha ọrụ anyị mepụtara wee pịa "Malite".
Mgbanwe amalite. Ọnọdụ ọganihu a gosipụtara dika pasent.
Mgbe e mechara ya, n'ọhịa "Ọnọdụ" uru ga-apụta na aha aha ahụ "Emere".
Iji gaa na ndekọ ebe faịlụ, pịa aha ọrụ ahụ. PKM. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ "Oghere Ebe Nchọta".
Na Explorer Akwụkwọ ndekọ nwere video a gbanwere ga-emeghe.
Anyị atụlewo ihe niile nwere ike ịhọrọ iji gbanwee vidiyo MKV na ụdị AVI, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ, ma eleghị anya narị otu narị, nke ndị na-emegharị vidiyo na-akwado nduzi ntughari a. N'otu oge ahụ, anyị gbalịrị ikpuchi nkọwa nke ngwa ndị kasị ewu ewu na-arụ ọrụ a, site na nke kachasị mfe (Ntugharị) iji jikọta ike (Xilisoft Video Converter na Format Factory). Ya mere, onye ọrụ, dabere na omimi nke ọrụ ahụ, ga-enwe ike ịhọrọ nhọrọ nhọta nabatara maka onwe ya, ịhọrọ usoro ihe kachasị mma maka ebumnuche ụfọdụ.